10:32 am, शुक्रबार, जेठ ३०, २०७७
लामो लकडाउनपछि बजार खुल्ने तयारी भइरहेको छ । करिब ८० दिन लामो लकडाउनपछि खुल्ने बजारमा सवारीसाधन बिक्रेता कम्पनीहरुले कसरी आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्ने छन् भन्ने विषय अहिले पेचिलो बनेको छ । मानिसको आम्दानी घटेको छ । काममा फर्कनु पर्ने अवस्था छ । यस्तोमा भोलिका दिनलाई अटोमोवाइल व्यवसायीले कसरी लिएका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर नाडा अटोमोवाइल्स एसोशिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष करण चौधरीसँग गरिएको कुराकानीको संम्पादित अंशः
यति लामो लकडाउन पछि बजार खुल्दैछ । अटोमोवाइल व्यवसायीले काम कसरी अघि बढाउने योजना गर्दैछन् ?
अटोमोवाइल व्यवसायीले आफ्ना शोरुमदेखि ग्यारेजसम्म खोल्नको लागि निश्चित सावधानी अपनाउनु पर्ने विषय हामीले नाडा अटोमोवाइल्स एसोशिएसन अफ नेपालको तर्फबाट सबै सदस्य साथीहरुलाई ‘गाइड लाइन’ नै बनाएर सर्कुलर गरिसकेका छौं ।
अहिलेको हाम्रो चुनौती भनेकै अटोमोवाइल क्षेत्रबाट सेवा लिने कुनैपनि ग्राहक र यो क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसको स्वाथ्यमा असर नआउनेगरि आफ्नो व्यवसाय कसरी संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयले नै मुख्य प्राथमिकता पाउने देखिन्छ । यसमा हामी सबै व्यवसायी कटिवद्ध रहेका छौं ।
अबको अटोमोवाइल क्षेत्रमा देखिने मुख्य चुनौती के के देख्नुभएको छ ?
अहिलेको मुख्य चुनौती नै हाम्रा कारण कुनैपनि मानव शरिरमा कोरोनाले प्रवेश पाउनु हुँदैन भन्ने हो । यस पटकको बजेटले पनि केही आर्थिक भार ग्राहक र कम्पनीहरुमा थपिदिएको छ । यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर नाडाले आफ्नो कृयाकलाप अगाडि बढाउँदै लगेको छ ।
बजेटपछि आउने मौद्रिक नीतिले अटोमोवाइल क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी गर्ने कर्जाको अनुपात बढाउनु पर्ने हुन्छ । अहिले गाडीको मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्रै रहेको छ । यसलाई अवस्था हेरिकन ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्स सुविधा पुर्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । अहिले बैंकहरुसँग तरलता छ । लगानीको लागि अटोमोवाइल क्षेत्रले कर्जा खोजिरहेको अवस्था हो । यसमा मौद्रिक नीतिले केही निर्णय गरेको खण्डमा गाडीको बिक्रीमा केही हदसम्म सहज हुन्थ्यो ।
करिब ३ महिना लकडाउनमा वित्यो । यस अवधिमा थन्किएका सवारीसाधनको सर्भिसिङ र वारेन्टी लगायत कुराहरु पनि छन् । यसमा कम्पनीहरुले कसरी काम गर्दै छन् ?
सबै कम्पनीहरुले यो सुविधा थप गर्दै लान्छन् भन्ने लाग्छ । मैले सुजुकीले के गर्छ भन्ने विषयमा मात्रै भन्न सक्ने भएँ । हामीले गरेको वाचा अनुसार हामी यस अवधिमा पर्ने गाडीको वारेन्टीदेखि सर्भिसमा कटिबद्ध छौं । यसवीचमा आएको समस्यालाई हामी खटेर मुकाबिला गरिरहेका छौं । ग्राहकलाई फोन गरेर गाडीको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिएका छौं । लकडाउन अवधि बराबरको वारेन्टीको समय पनि हामी थप गर्ने छौं ।
बजेटले इलेक्ट्रीक सवारीसाधनमा लाग्दै आएको करमा हेरफेर गरेर लगभग किन्नै नसक्ने अवस्था आयो । नाडाले यसमा आपत्ति पनि जनायो । यद्यपी इलेक्ट्रीक सवारी साधनको प्रयोग बढाउने मुद्दा राज्य छाडेको छैन । यस्तो महंगो करकोे निरन्तरता कसरी संभव छ ?
पहिलो कुरा राज्यले इलेक्ट्रीक सवारीसाधनको लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्छ । त्यसको लागि चार्जिङ स्टेशन लगायतका विषय आउँछन् । अर्को, अहिले लगाएको कर घटाउनु पर्छ । यहि करमा इलेक्ट्रीक गाडी किन्न मानिसलाई आकर्षित गर्न सकिदैंन । अर्थमन्त्री ज्यूले यो विषयलाई सम्बोधन पनि गर्छु भन्नु भएको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा इलेक्ट्रीक गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा सरकार अडिग नै छ । त्यसैले करको समस्या समाधन गर्दै इलेक्ट्रीक सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनु पर्छ ।
सरकारले पछिल्ला दिनमा नाडाको कुरा सुन्न छाडेको हो कि नाडाले ‘लविङ’ गर्न छाडेको हो ?
विगतदेखि नै हाम्रा केही कुरा सरकारले माने जस्तो र केही नमानेको जस्तो देखिन्छ । अहिले पनि हाम्रो केही कुरा सरकारले सुनेको छ । एसेम्बल प्लान्ट लगाएर एसेम्बल किट ल्याउदा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिने निर्णय भएको छ । स्पेयर पार्टसको अन्तःशुल्क हटेको छ, भलै भन्सार बढ्दा धेरै फाइदा हुने अवस्था छैन । अहिले देशको परिस्थिति त्यस्तै भएर होला ।
भविष्यका सवारीसाधन कस्तो हुने देख्नु भएको छ ?
भविष्य जहिल्यै पनि नयाँ आविष्कारको हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगबाट चल्ने सवारीसाधनको विकल्पको खोजी सुरु भएको लामो समय भइसकेको छ । केहीअघि हाइब्रिड गाडी चर्चामा थिए । अहिले इलेक्ट्रीकको साथमा सोलार इनर्जी र हाइड्रोजन फ्यूल सेल कारको पनि संम्भावना देखिएको छ । विश्वका ठूला कार निर्माता कम्पनीहरुले नयाँ आविष्कारमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन् । त्यसले नयाँ टेक्नोलोजीमा आधारित सवारीसाधन अबको रोजाई हुन् ।
यस्ता सवारीसाधन पूर्वाधार निर्माण बिना आउन सक्दैनन् ।
मारुती सुजुकीले कहिलेसम्म इलेक्ट्रीक कार बजारमा उर्ताछ ?
सुजुकीले इलेक्ट्रीक कारको परिक्षण सुरु गरेको धेरै भइसक्यो । अहिल्यै कुन मितिमा इभी आउछ भन्ने कुराको आधिकारीक जानकारी कम्पनीले दिएको छैन । यद्यपी २०२० मा इभी ल्याउने भन्ने कुरा पहिल्यै भनेको थियो । तर, कोभिड १९ को कारण केही पछि धकेलिने अवस्था भने विद्यमान छ । ढिलामा २०२१ मा हाम्रो इभी आउने छ ।
नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्ने विषयमा तपाईहरुको धारणा के हो ?
यो विषयमा मैले धेरै पटक अर्थमन्त्री ज्यूदेखि सचिव ज्युहरुलाई भनेको छु । नीतिगत स्थिरता हुने हो भने नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बल गर्न सकिन्छ । उहाँहरुले यदि यसमा प्रस्ट पार्नु भयो भने तपाईंहरुकै कार्यकालमा गाडी एसेम्बल गर्छु भनेको हुँ । हामी सुजुकीका कार यही एसेम्बल गर्न सक्छाैं ।
अहिले बजेटले दिएका सुविधा कम्तीमा यति वर्ष भनेर प्रष्ट पार्नु पर्छ । नत्र अहिलेको अवस्थालाई हेरर लगानी गर्यो पछि उत्पादन हुने समयमा यी दर बढेर व्यवसाय चलाउनु कि बन्द गर्नु भन्ने अवस्था आउन सक्छ ।
स्थिर नीति नियम नहुँदा व्यवसायी मर्कामा पर्छ । नीतिगत स्थिरता भए हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । म र मेरो कम्पनी पनि नेपालमा गाडी एसेम्बल गर्न तयार रहेको छ ।
कोभिड १९ पछिको अटो बजार कस्तो होला ?
देशमा आउने हरेक विपतपछि बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ जस्तो लाग्छ । हाम्रा अघिल्ला अनुभवले त्यस्तै देखाउँछन् । महंगा र ठूला गाडीमा समस्या होला तर, महामारी पछि साना गाडीको बजार बढ्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।
नेपालमा उपलब्ध एक दर्जन इलेक्ट्रीक कारको मूल्य
होन्डा ग्रोम २०२२ मोडलमा यस्तो हुनेछ परिमार्जन
नयाँ फिचरसहित यामाहा एफजेडएस भि ३ नेपाल आउने
स्कोडा कुशकको ७ सवल पक्ष, यस्तो हुन सक्छ नेपालमा मूल्य
हुन्डाईका २१ चार्जिङ स्टेशन संचालनमा, थप स्थानमा बनाउने तयारी
यामाहाले १० दिनपछि नयाँ मोटरसाइकल सार्वजनिक गर्ने
हुन्डाईले सार्वजनिक गर्‍यो क्रेटाको नयाँ भेरियन्ट, ‘एसएक्स’भन्दा सस्तो हुने
होन्डाको १८४ सीसी मोटरसाइकल नेपाल आउँदै, कति पर्ला मूल्य
बन्द भयो नेपालमा सर्वाधिक सफल र सस्तो विद्युतीय कार !
यस्तो छ पल्सरको मोडल अनुसारको मूल्य, कस्तो आउला नयाँ अफर
सेग्वे (segway) ब्राण्डका इलेक्ट्रीक सवारी साधन चाँडै विक्री सुरू गर्दैछाैं : लाेकेश ओली
चालकलाई कारबाहीले मात्रै पुग्दैन, सामाजिक बहिस्कारमा परिन्छ भन्ने डर हुनुपर्छ : एसएसपी भट्टराईको अन्तर्वार्ता
सार्वजनिक यातायातमा बैंकहरू लगानी गर्न डराएका छन्, तर रिकभरी भने राम्रो छ : सिप्रदीका सीईओ श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता
सिथिल बनेको कार विक्रीलाई नयाँ मोडलले ‘आइस ब्रेक’ गर्छ कि: निराकार श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता
तीन वर्ष भित्र नेपालमा फक्सवागन ‘टप फोर’मा हुन्छ : विशाल घिमिरेको अन्तर्वार्ता